Soomaalidu waxay u baahan tahay Hoggaamiye la mida Abraham Lincoln. W/Q: Maxamed Aadan – somalilandtoday.com
Soomaalidu waxay u baahan tahay Hoggaamiye la mida Abraham Lincoln. W/Q: Maxamed Aadan
Abraham Lincoln wuxuu xal ka ka gaadhay dagaalladii Koonfurta iyo Woqooyiga Maraykanka. Wuxuu meesha ka saaray in la addoonsado dadka madaw. Wuxuu ku guulaystay Midnnimada Maraykanka isagoo meesha ka saaray 13-kii gobol ee Confederate Stateska la baxay kuwaas oo rabay inay ka go’aan Maraykanka intiisa kale.
Waxaanu dib u dhisay Maraykanka weyn ee macnaha kuleh adduunyada maanta. Waayo Soomaalida u baahan Abraham Lincoln? Innaga… Innagee..
Inaynu eedeysnayaasha Soomaalida meel kasta oo ay joogaan oggolaanno in la maxkamadeeyo.
In la abuuro isfaham dhaw oo ISAAQ iyo Daarood ah maadaama muranka siyaasiga ahi uu salka ku hayo xatiiltan hoose oo u dhexeeya beelahan.
Cali Guray Oo Ka Hadlay faragelinta Uu Madaxweyne Biixi Ku Sameeyey Suldaanka Guud Ee Beelaha Isaaq Suldaan Xasan